Waladiinta Ciyaalkooda uga maqan yihiin Ertareya oo loogu baaqay Kacdoon | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Waladiinta Ciyaalkooda uga maqan yihiin Ertareya oo loogu baaqay Kacdoon
Waxaa sii xoogeesanaya Walaaca ay qabaan waalidiin badan oo wiilal ay dhaleen tababar ciidanimo loogu qaaday dalka Eritrea , kuwaa oo hada lasoo sheegayo in qasab lagu galiyay dagaalka ka socday gobolka Tigrey laguna laayay qaar badan oo kamid ah dhalinyaradaasi.
Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya looga baahan yahay in uu qanciyo waalidiinta caruurtooda maqan yihiin una sheego xaalkooda dhabta ah.
Waxa uu sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ugu baaqay Waalidiinta caruurtooda maqan yihiin hadii jawaab ka waayaan Madaxweynaha in ay degaan ay ilinka Vila Somalia kana dhaqaaqin halkaas ilaa iyo inta ay jawaab cad ka
”Masuuliyadda wiilasha maqan waxey marka koowaad ku dhaceysaa Madaxweynaha oo ah taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida. Marka xigana taliyaha hay’adda nabadsugidda oo isagu qoray dhallinyarada una diray dalka Eritrea. Labadooda ayaa laga rabaa in ay qanciyaan waalidiinta wiilashooda weysan, madaxweynuhu waa in uu la kulmaa waalidiinta, xaq ayey ugu leeyihiin in uu qanciyo. Haddii uu diido waalidiintu waa in ay ilinka Vila Somalia degaan, kana dhaqaaqin ilaa iyo inta ay jawaab cad ka helayaan.” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay wiilashada askarnimada loogu qaaday Eritrea aan la qafaalin balse halkaasi dowlada geesay, waxa uuna ugu baaqay Madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin in runta u sheegay Waalidiinta walaacsan.
”Wiilasha ciidanka iyagaa qortay ee lama qafaalin, mana aha ciidan nabad ilaalin dal kale loogu diray. Madaxweynaha iyo taliyihiisa NISA waa waalid ubad leh, waxba yaysan meelo kale ku meeraysan ee haddii uusan warku jirin, waalidiinta iyo wiilashooda ha wada hadalsiiyaan, haddii uu dhab yahayna ha qirteen, waa lagula xisaabtamayaahe.” ayuu yiri Mr Warsame.
Hadalka siyaasigan mucaaradka ah ayaa kusoo aadaya xili xalay Wasiirka Warfaafinta Xukuumada Soomaaliya beeniyay wararka sheegaya in dhalinyaro tababar loogu qaaday dalka Eritrea la galiyay dagaalka Itoobiya laguna laayay halkaasi.
Previous articleAlshabaab oo la Wareegay deegaanka Mashallaay oo u dhaxeeya magaalooyinka iyo Buula-Mareer
Next articleCiidamada Danab oo deegaano Cusub kala wareegay Alshabaab
War saxaafadeed ay soo saareen Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa waxay ku shaaciyeen in wixii ka bilowda 8 February 2021 aanay Madaxweyne Farmaajo u aqoonsaneyn...
Talyaaniga Oo Lugaha La Galay Xiisad iyo xaalado adag.
Abawaan Carabow oo ka mid ahaa golaha abwaanada Soomaaliyeed oo...
Dowlada Federaalka iyo Maamul Goboleydyada oo ogolaaday shir ay Beesha Caalamka...